Rasaasa News – Frunkfort: 3o Caruura iyo 3 Ciroole!
Frunkfort: 3o Caruura iyo 3 Ciroole!
on January 6, 2012 1:18 am
30 Caruura iyo saddex sir doon u tagay Frunkfort iyo saqaafaha Sayyid Cabdi ku sugayo saddarka degaanka Somalida Ethiopia ma sina.
Madaxweynaha dawlada degaanka Somalida Ethiopia, ayaa socdaal loogu magac daray ‘UBO Quusis’ ku sugaya nolosha dadweynaha degaanka, ayaa saaka gaadhay degmada Danood ee dagal Wardheer.
M/wayne Cabdi Maxamuud Cumar, ayaa mudo saddex todobaad ah lug ku gaalaa baxaya xuduudka dheer ee degaanka Somalida Ethiopia la wadaago dalka Somaliya, gaar ahaan gabalada Dhagaxbuur, Qoraxeey, Wardheer iyo Godey.
M/weynaha ayaa u kuur galaya nolosha dadweynaha ku dhaqan gabalada uu marayo, waxaana uu hubsanayaa in ay degaanadaas wali ka jiro ururka UBO, ee hogaamiyo Jwxo-shiil, oo isagu hore dhibaato ugu gaystay degaanadaas.
Dhinaca kale, kooxda UBO, hogaankeeda Jwxo-shiil, oo dhawaan la sheegay in uu cafis weydiistay dawlada degaanka Somalida Ethiopia, ayaa kuray iyo foodley faraha laga qaad ah u dalxiis geeyey dalka Jarmalka.
Jwxo-shiil iyo Jananka agg jooga oo aan Ethiopia laga ogolayn, ayaa macalinka u macmacaanaynaya in uu UBO, u guuliyo Jijiga. Macalinka waxaa labo habeen la horgeeyey walkiilka wadanka Ethiopia u jooga Jarmalka. 3o-ka caruurta ahna, dalxiiska Frunkfort ka xiga uu geeyo Jijiga.
Arintan ayaa timid ka dib kolkii la waayey ruux geeya magaca kooxda UBO, Jijiga, saddexdii ugu mudnayd kooxduna doorbiday dibad joog daa,in ah iyo dalka Somaliya.
Waxaa habeen walba ESTV laga sii daayaa dhalinyaro dhaqan celin ay u samaynayaan masuuliyiinta dawlada degaanka Somalida Ethiopia. Dhalinyaradaas oo ku eedaynaysa Jwxo-shiil, in uu ka lumiyey mustaqbalka, ka dib kolkii uu u dhiibay qoryo ay ku dilaan walidikood iyo walaalahood.
Dhibaatooyinkii uu gudaha ka waday Jwxo-shiil, wakhti xaadirkan way ka dhamaatay gudaha degaanka Somalida Ethiopia iyo waliba qurbaha.
Nasiib daro waxaa uu xiligan Jwxo-shiil, shiishka saaray dhalinyaro faraha laga qaad ah, oo ku nool dalalka Yurub, tacliin iyo tacabna lagala quustay.
Dalalka reer galbeedka, waxaa xaaraan ka ah in dad waaweyn ay xidhiidh dhaw la yeeshaan caruur ayna dhalin. Dadka arimaahs lagu helo waxaa lagu sameeyaa baadhid qoto dheer, waayo waxay dalalkaasi u arkaan in caruurta caqliga laga xadi karo siyaabo khaldana looga faa,iidaysan karo.
Madaxda UBO, ayaa sheegay in ay kala qayb galayeen shir dhalinyarada uga socday Frunkfort, laakiin waxaa la sheegay in dhalinyaradu afarta habeen ee ay joogeen Franfort ay ku cawaynayeen club-ka caanka ah ee Velvet Club.
Shirka UBO sheegtay, ayaan sawiro Intenet lagu sharxay mooyee waxba laga sheegin shar iyo khayr.
Waxaa in la isweydiiyo u baahan sababata ay kooxda UBO, uga faa,iidaysato dhalinyarada yar yar gudaha iyo dibadaba. Iyo sababta ay kooxda UBO uga fogaato in ay xidhiidh la wadaagto dadka waaweyn?